လမ်း 12: အားလုံးချစ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
လမ်း 12: အားလုံးချစ်
ကောင်းစွာ, sorta kinda ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး
သူမသည်ခွငျးခံရသညျ့ kinda အလင်းခဲ့သည်, သူကသူတို့ကိုကြိုက်တယ်မျက်စိနှင့်တူ
သူကသူမ၏ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်, သူမသူတို့ကို features တွေကန်ပြီးတယ်
သူ၏ homies သူ့ကိုသတိပေးခဲ့သည် “မိနျးမသင်ဖြည့်စွက်နိုင်သောနှေးကွေး”
ဒါပေမယ့်သူက bleachers နေချင်ကြပါဘူးမေတ္တာတော်ကိုဂိမ်းထဲမှာင်
သူ၏ကောင်လေးသူ့ကိုဒီလက်ျာမကသူ့ဇနီး '' အကြောင်းမရှိပြောပြသို့ပြောသည်
သူက kinda ယခုပိတ်မိနေနှင့်ထိုအတူသူကဆင်းထောက်ခံင်
အခုသူအပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်မှန်များဖိတ်သင့်တယ်နဲ့တူသူ feeling င်
ဒါကြောင့်သူကသူ့ကွဲပြားခြားနားသောချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း '' သူမ၏ကိုပြောတယ်
ဒါဟာသူက fix ချင်မတရားသောသူသည်မယ့်တစ်ဦးစွဲင်
ဒီထိုက်သည်? '' သူ့ဇနီးကသူရှေးခယျြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပြောပါတယ်စေ
သူက screen ပေါ်မှာကတော်တော်လေးအမြိုးသမီးကိုချစ်အကြောင်းရင်း
အကြှနျုပျ၏ dude ဂျေးတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းများမှာဖြစ်ပါတယ်
သူကနောက်ခံမှာမိမိ Laptop ကိုသူမ၏ရုပ်ပုံရဲ့အယူ
Tish • ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 2:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာမပြောပါဘူး “ဒါသူက Dance Dance ပေမယ့်ငါပြောမေ့, စသည်တို့ကို…”? သငျသညျနှစ်ကြိမ်တစ်ခုခုထပ်ခါတလဲလဲတူသောဒါဟာအသံ.
Caitlin • မေ 26, 2016 တွင် 11:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသီချင်းသည်ငါ့ဆီသို့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသော. ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာ porn နှင့်အတူရုန်းကန်. ငါနေဆဲတစ်ခါတစ်ရံတွင်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသျောလညျးဘုရားသခငျငါ့ကိုအမှီဖွင့်ရ. ဒီသီခငျြးကိုနားကြားနေချိန်မှာငါလက်ထပ်သို့မဟုတ်ဘာမှမဟုတ်သော်လည်းငါနေဆဲပင်ဆက်ဆံရေးရတဲ့နှင့်အတူရုန်းကန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမျက်ရည်ကျဖြိုဖျက်. ဒီသီခငျြးကိုဝေမျှဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!